Wq/ne/विकिकथन:आजको कथनहरू - Wikimedia Incubator
< Wq‎ | neWq > ne > विकिकथन:आजको कथनहरू
Template:Wq/ne/आजको कथन/जनवरी २३, २०२१
आजको कथन खण्डमा ऐतिहासिक व्यक्तिहरू द्वारा कहिएका महत्वपूर्ण कथन (उक्ति)हरू राखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको कथन राखदा स्रोत अनिवार्य राख्नु होला । आफ्नु बिचारलाई कुनै व्यक्तिको नाममा जोडेर नलेखनु हुनु अनुरोध छ । यदि कुनै कुनै कथन झूट भएको तपाईलाई लाग्दछ भने उक्त कथनको मितीको वार्तालाप पृष्ठमा सुझाव राख्नु होला ।
आजको कथन तयार गर्नुहोस्
तलको वक्समा आजको कथन तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वँत तयार हुन्छ ।
जनवरी, २०२१[edit source]
“ मन्दिर जाऊ माग्न होइन जो मिलेको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिएर आउ माग्छौ भने तिमी मगन्ते भिखारी हो ।🙏 ”
“ हामी धर्म र चिन्तन विना रहन सक्छौ तर मानवीय प्रेम विना रहन सक्दैनौ ”
“ कुनै मानिसको वास्तविक चरित्र तब निस्किञ्छ जब ऊ नशामा हुन्छ । ”
“ न चोरले चोर्छ नराजालाई कर तिर्नु पर्छ नदाजु भाईलाई बाँड्नु पर्छ नबोक्न भारी हुन्छ जति खर्चगरो त्यति बढ्ने संसार कै सबै धनमा श्रेष्ठ धन विद्या हो , ”
“ मनको अशुद्धता लालच हो, जिब्रोको अशुद्धता असत्य हो , आँखा अशुद्धता कुनै अन्य पुरुषकी पत्नीको सुन्दरता र उसको धन मा कुदृष्टि गर्नु हो । कानको अशुद्धता अरुको बारेमा नराम्रो सुन्नु हो । ”
“ धर्मांतरणले कट्टरता, साम्प्रदायिकता, र अशान्तिलाई जन्म दिन्छ । यसले देशवासीलाई र सत्पुरुषहरुलाई निराशाको अन्धकारमा डुबाउछ । ”
“ सिंहदरवार होस् कि स्यालदरवार , भोलिवादलाई शिरोधार्य नगर्ने अड्डाअदालत पाउनु प्याज नखाने बाहुन भेट्टाऊनुजस्तो गाह्रो भैसक्यो अब । ”
“ एउटा भुललाई अर्को भुलले सच्याउन सक्तैन ”
“ सबै चिजहरु अनित्य छन्, त्यसैले कुनै पनि वस्तुप्रति आशक्त नहोऊ । ”
२०, जनवरी न्यायले कमाएको धनले परिवारको पालन गर
“ आफ्नो इज्जत चाहनेले अरुको इज्जत गर्न जान्नुपर्छ। ”
फेब्रुअरी, २०२१[edit source]
“ ढिलो प्राप्त गरेको सम्पूर्णताको तुलनामा निरन्तर सुधार राम्रो हो । ”
“ सबैमा समानता, सहृदयता र तपाईं शब्दको प्रयोग गर्ने गरौ । ”
“ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयासै नगरी छाडिदिनु हो। सफलताको सबैभन्दा भरपर्दो सूत्र भनेको केवल एकपटक थप कोसिस गर्नु हो। ”
~थोमस एल्वा एडिसन~
“ प्रजातन्त्र भनेको जनताको, जनताको लागि, जनता द्वारा गरिने शासन पद्दती हो । ”
“ मेरा लागि प्रेम भनेको नै एकआपसले महसूस गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ । मलाई आफ्नो प्रेम नै यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । सम्बन्धका लागि रेस्पेक्ट, अन्डरस्टान्डिङ भएन भने सम्बन्ध विफल पनि हुन सक्छन् । ”
“ मैले कोहि त्यस्तो व्यक्ति भेटेको छैन, जसबाट मैले केहि नसिकूं । ”
“ मानिस उसले पाएको सुविधाले होइन, उसको लक्ष्य मेहनत र साहसले सफल बन्छ । ”
“ अकासको आगो पतालको पानी मुख बाट ताने नाक बाट जाने ”
~गाँउ खाने कथा~
“ भगवानलाई पूजा गर्नुभन्दा सत्यलाई आत्मसात गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ”
“ मेरो सबैभन्दा असल र नजिकको साथी त्यो हो, जसले म भित्र भएको क्षमतालाई बाहिर ल्याईदिन्छ। ”
“ मात्र उभिएर पानी हेर्दा तपाई नदी पारी जान सक्नु हुन्न अगाडि बढ्नु होस् । ”
“ संस्कृतको पुरातनता जे पनि हो, संस्कृत भाषा एक आश्चर्यजनक संरचना भएको भाषा हो । यो ग्रीक भन्दा अधिक परिपूर्ण छ र लैटिन भन्दा अधिक शब्दबहुल छ तथा दुईटै भन्दा अधिक सूक्ष्मता पूर्वक दोषरहित गरिएको छ । ”
~सर विलियम जोन्स~
“ कल्पनाको शक्ति हामीलाई अनंत बनाउछ । ”
“ कुनै सानु-सानु योजनाहरू नबनाउ; त्यसमा मनुष्यलाई प्रेरित गर्ने कुनै जादु मिसिएको हुदैन । ठुलो योजना बनाऊ उच्च आशा राख र काम गर । ”
~डैनियल एच. बर्नहम~
“ यसरी कार्य गर जस्तो की तपाई पहिले देखि नै खुसी हुनु हुन्छ । तथा यसको परिणामस्वरुप तपाई खुसी प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । ”
“ जो क्रोध गर्दैन , लोष्‍ट, ढुङ्गा र सुवर्णलाई एउटै समझिन्छ, शोकहीन, संधि-विग्रह देखि रहित, निंदा-प्रशंसादेखि शून्‍य, प्रिय-अप्रियलाई त्‍यागेको तथा उदासीन छ, त्यही भिक्षुक हो । ”
“ मानिस प्राय भन्छन् कि प्रेरक विचारदेखि केहि हुन्न । हो भाई, हुन त नुहाएर पनि केहि हुन्न, तब त हामी यसलाई सधै गर्ने सल्लाह दिन्छौ । ”
“ जब तपाईंले प्रयास नै गर्नु भएको छैन भने तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ कि कुनै अवसर छ कि छैन भन्ने कुरा ? ”
“ सफलताको लागि मूल कुरा तिम्रो मेहेनत होइन, मेहेनत माथीको प्रेम हो । ”
मार्च, २०२१[edit source]
“ जुन विचार कार्य रुपमा परिणत हुन सक्दैन त्यस्तो विचारलाई गर्भपातसंग तुलना गरिन्छ, त्यसैगरी जुन कार्य विचारमाथी आधारीत हुदैन, त्यस्तो कार्य अस्तव्यस्तता र अराजकतामा गणना हुन्छ । ”
“ आफ्ना विचारहरुलाई खराव काम हुन नपाओस भन्ने कुरमा सजग राखौं किनभने हामीजस्तो रोप्छौं, त्यस्तै टिप्छौं । त्यसैले आफ्नो विचारलाई उच्च बनाउनुहोस्, श्रद्धा र दृढतालाई अपनाउनुहोस् । ”
“ एकाग्रतापुर्वकको विचारले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउँछ । ”
“ महान विचारधारा धेरै उपकारमा आवद्ध हुन्छ । ”
“ तिव्र इच्छाको बोझले नकिचिएको स्वतन्त्र विचार मात्रै सौन्दर्यको कल्पना हुन सक्छ । ”
~प्रा. वेट्रण्ड रसेल~
“ सयौं फुलहरु फुलाउ र सयौं विगचारहरुको मन्थन गर । ”
“ जस्तो हाम्रो विचार रहेको हुन्छ, त्यस्तै नै हाम्रो शारिरीक स्थिती हुन्छ, शरिरीक स्थिती विचार भन्दा विपरीत हुन विल्कुलै असम्भव हुन्छ । ”
“ सफलताका तीन सूत्रहरू छन्, एक, कहिल्यै हरेस नखाउ, दुई, कहिल्यै हरेस नखाउ र तीन कहिल्यै हरेस नखाउ । ”
“ डनलाई त ११ मुलुकहरूका पुलीस खोज्दै छन्, तर डनलाई पकडन अफ्ट्यारो मात्र होइन असम्भव छ। ”
“ हरेक व्यक्ति सक्षम हुन्छ । तर यदि तिमीले माछालाई रुख चढ्न नसकेको आधारमा मूल्यांकन गर्छौ भने उसलाई सधै असक्षम ठान्नेछौ । ”
“ स्कुलमा म आफ्नो कक्षामा राम्ररी पढाई गर्न सक्दिनथे । त्यो एकदमै राम्रो कक्षा थियो । मेरो कक्षाकार्य एकदमै नराम्रो हुन्थ्यो । मेरो लेखाइले शिक्षकलाई निराश तुल्याउँथ्यो । तर, मेरा सहपाठीहरुले मलाई आइस्टाइन नामले बोलाउथे । त्यो सायद उत्कृष्ट संकेत थियो । ”
“ म चित्रकलाको सपना देख्छु र त्यसपछि म मेरो सपना अरुलाई देखाउँछु। ”
~विन्सेन्ट वेन गो~
अप्रिल, २०२१[edit source]
“ असफलताको मौसम, सफलताको बीउ रोप्नको लागि सर्वश्रेष्ठ समय हुन्छ । ”
“ हिजो आजको याद हो र भोली आजको सपना हो । ”
“ मानिसहरू संग सामंजस्य स्थापित गर्न सक्नु नि सफलताको एक अतिमहत्वपूर्ण सूत्र हो । ”
“ व्यक्ति यदि लोभलाई त्याग दिन्छ भने राजा भन्दा ठुलो सम्मान प्राप्त गर्न सक्छ किन की संतोषले नै मानिसको शिर उच्च राखछ । ”
“ यदि कुनै असाधारण प्रतिभा भएको व्यक्ति संग हाम्रो भेट भयो भने हामीले त्यो संग सोधनु पर्छ ऊँ कुन कुन पुस्तकहरू पढ्छ । ”
~राल्फ वाल्डो इमर्सन~
“ हरेक बिहानिमा एक कदम अगाडि बढाउदै जाउ, एकदिन उसलाई पाउने छौ, जे कुनै बेला टाढा लाग्ने गर्थ्यो। ”
“ मिलेर काम गर्नु संगको खास कुरा यो हो कि तपाइको पक्षमा सधै अरु पनि मानिस हुन्छन । ”
“ जिन्दगीको मेरो सूत्र धेरै नै सरल छ । बिहान उठ्छु राति सुत्छु यसको बिचमा जति सम्भव हुन्छ स्वयंलाई व्यस्त राख्छु । ”
“ यदि राष्ट्रलाई भ्रष्टचार मुक्त बनाउने हो भने मेरो विचारमा यो समाजका तिन सदस्यद्वारा यो हुन सक्नेछ, आमा, बुवा र गुरु । ”
“ पहिले तिमी उज्यालो तर्फ फर्क त्यस पछी छायाँ स्वतः पछी पर्नेछ । ”
“ मनलाई वसमा राख्न सकिएन भने यसले स्वयं विरूद्ध शत्रूको व्यावहार गर्दछ । ”
“ एक गरीब मानिसले वर्षमा एक पटक नयाँ बर्ष मनाउँदछ। एक धनी मानिस हरेक दिन मनाउँछ । तर सबै भन्दा अमीर व्यक्तिले हरेक क्षण मनाउँछ । ”
~रवि शंकर~,~नयाँ बर्ष~
“ जतिखेर मैले कसरी बाँच्ने भनेर सिक्दै छु भन्ने सोचिरहेको थिए, त्यतिखेर म कसरी मर्ने भनेर पो सिक्दै रहेछु । ”
~लियोनार्दो दा भिन्ची~
“ जस्तो प्रकारले पुराना थोत्रा कपडा मानिसले त्यागेर नयाँ सुन्दर कपडाको चाहना गर्छ तेस्तै आत्माले पनि पुरानो जीर्ण शरीर त्यागेर नयाँ शरीर रोज्छ । ”
“ प्रजातन्त्रमा सरकारको गठन र विघटन भइरहन्छ, तर त्यसको पनि प्रजातान्त्रिक पद्दति छ । ”
“ संसारमा सबैभन्दा प्रिय प्राणी भनेको विश्वासिली पत्नी हुन् । ”
ओस्कर बाइल्डको तस्वीर
“ मैले देखेको छु जब एउटा मान्छे कुनै महिलालाई प्रेम गर्छ तब हरचिज दिदैन तर जब महिलाले कसैलाई प्रेम गर्छिन त सर्वस्व सुम्पन्छिन् । ”
“ कुनै पनि देशलाई जित्नका लागि सबैभन्दा पहिले त्यहाँका नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ । ”
“ यो हाम्रो कर्तव्य हो कि हामी आफ्नो स्वतंत्रताको मूल्य आफ्नो खुनले तिर । हामीले आफ्नो बलिदान र परिश्रमबाट जुन स्वतंत्रता मिलोस । हामी भित्र त्यसको रक्षा गर्ने बल हुनु पर्छ। ”
“ म यो भन्न चाहन्छु कि सिसप बन्नु कुनै धेरै ठूलो कुरा हैन । मेरो मान्यता छ कि म उनिहरूलाई यो अधिकार दिनेछु जो कि केही समय देखि यहाँ सक्रिय छ । म प्रबन्धक शब्दको हव्वेलाई खतम गर्न चाहन्छु । यो त मात्र प्राविधीक कुरा हो कि कसैलाई यहाँको केही मुख्य प्राविधीक कार्य गर्नाको लागी चुनिएको छ, सबैलाई हैन । म चाहदैन कि कसैले सोचोस् कि प्रबन्धक पद कुनै विशेष तक्मा हैन ”
“ केही पुस्तकहरू चाख्नका लागि हुन्छन्, केही पुस्तकहरू निल्नका लागि र थोरै मात्र पुस्तकहरू चपाउन र पचाउनका लागि हुन्छन् । ”
“ प्रेमको लागि कुनै सही समय र सही स्थान हुदैन ; यो कुनै पनि समय हुन सक्छ । ”
“ जब म भन्न चाहन्छु कि यदि तपाई देवी देवता हो भने मेरो मतलब हुन्छ कि तपाईंमा अनन्त संभावनाहरु र तपाईंको क्षमताहरु अनन्त छन् । ”
“ हामी को हौं, यो हामीलाई थाहा छ तर के हामी के बन्न सक्छौ यो थाहा छैन । ”
“ जीवनमा तपाईंलाई जो पनि मौका चाहियो त्यो तपाईंको कल्पनामा भरोसा गर्छ, कल्पना तपाईंको मस्तिष्कको कार्यशाला हो, जसले तपाईंको मनको उर्जालाई सिद्धि र धनमा बदलिन्छ । ”
“ विद्या धन सबै भन्दा ठुलो धन हो । ”
“ मेरा सबै मित्र जसका साना साना भाई-बहिनी छन् जो कि हाई स्कूल जादै छन् मेरो सबै भन्दा तपाइँहरूलाई आवश्यक सल्लाह छ की प्रोग्राम कसरि गर्छन् सिक्नु पर्छ । ”
“ आत्मा एक्लै आउछ एक्लै जान्छ, न कसैले उसलाई साथ दिन्छ न कुनै उसको मित्र हुन्छ । ”
मे, २०२१[edit source]
“ बुबा र आमाको सम्मान गर्नुपर्छ र ठुला मानिसहरूको पनि, जीवित प्राणिहरु प्रति दयालुतालाई बलियो पार्नु पर्छ र सत्य बोल्नु पर्छ । ”
“ म कुनै पनि प्रविधिहरू प्रयोग गर्दिन; म अभिनय गर्न प्रशिक्षित छुइन । म मात्र चलचित्रहरूमा काम गर्न रुचि गर्छु । ”
“ खुसी हौ तर कहिले सन्तुष्ट न हौ । ”
“ आजको एक प्रमुख समस्या यो हो कि राजनीति यति कलंकित भई सको कि राम्रा मान्छे सरकारमा जादैनन् । ”
“ म एक नास्तिक हूँ र यसको लागि म भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु । ”
~जर्ज बर्नार्ड शा~
“ जब हामीले सैनिकहरूको कल्पना गर्यौ त हामीले जनताहरुलाई अर्को तर्फ राखेनौ । ”
“ उमेर कुनै ठुलो रोचक विषय होइन । कोई पनि बूढो हुन सक्छ । यसको लागि बस तपाईले धेरै बाच्नु पर्छ । ”
“ व्यक्ति जब आफुलाई अगाडि राखेर कुरा गर्छ भने त्यो बेला ऊँ सबै भन्दा थोरै बास्तविक हुन्छ । त्यसलाई एउटा मुखौटा देउ तब ऊँ सत्य बोल्छ । ”
“ मैले सिकेको छु कि गलतिहरू प्राय त्यति नै राम्रो शिक्षकहरू हुन सक्छन् जति की सफलता । ”
“ सामान्य देखिने व्यक्ति हरुनै संसारका सबै भन्दा राम्रा व्यक्ति हुन्छन । यही कारण भगवान यस्ता धेरै व्यक्तिहरूको सृजना गर्छ । ”
“ मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन यो चार बर्ण छत्तीस जात सबैको साझा फूलबारी हो सबैलाई चेतना भया । ”
“ जीवन नै एक सुनिश्चित जोखिम हो। जीवनको सार्थकता कुनै उदेश्यका लागि प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ। मानिस आफ्नो सङ्कल्प र आस्थाले यथार्थमा मानिस हुन्छ। ”
“ हाम्रो अगाडी जे काम आइपरेको छ त्यसलाई फत्ते गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । ”
“ विवाह पछि, अर्को पुरुषकी श्रीमती धेरै सुन्दर लाग्छन् । ”
~नवजोत सिंह सिद्धु~
जुन, २०२१[edit source]
“ बिद्या द्वारा विनय प्राप्त हुन्छ ,विनय द्वारा पात्रता प्राप्त हुन्छ पात्रता द्वारा धन प्राप्त गर्ने हुन्छ धन देखि दान धर्म गर्न सक्षम हुन्छ र सुख प्राप्त गर्छ । ”
“ मान–सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्स्योस् महाराज । हात नलम्काइबक्स्योस् ! आँखा नचम्काइबक्स्योस् ! आफ्ना सण्डमुण्डहरूलाई नचलाइबक्स्योस् ! र, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले पनि श्रीपेच उतारेर, सिंहासनमा राखेर, मैदानमा नेता भएर आउनुपर्यो ताकि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकियोस् । ”
जुलाई, २०२१[edit source]
“ अनुशासन, लक्ष्य र उपलब्धिको बीचको पुल हो । ”
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Template:Wq/ne/आजको कथन/अगष्ट
सेप्टेम्बर, २०२१[edit source]
“ सबै चिजहरु अनित्य छन्, त्यसैले कुनै पनि वस्तुप्रति आशक्त नहोऊ । - ”
“ सत्यलाई माया गर्ने व्यक्ति दार्शनिक हुन्छन। - ”
“ छेत्रिको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुदैन,मनिस् ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुदैन। - ”
“ निर्थक कुरामा झगडा गर्नु मुर्खको काम हो। - ”
“ नैतिकताको आधार करुणा हो। - ”
“ पुरानो कोट लगाउनु र नयाँ पुस्तक किन। - ”
~हेनरी डेभिड थोरो~
“ भलाई जति धेरै गरिन्छ, त्यति नै धेरै फैलिन्छ। ”
अक्टोबर, २०२१[edit source]
नोभेम्बर, २०२१[edit source]
“ रहेछ संसार निशा समान,
आएन ज्यूँदै रहँदा नि ज्ञान । आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो, ज्ञान, न भो विवेक
“ इश्वर तिमीले जगत बनायौ चन्द्र बनायौ सूर्य बनायौ यति सुन्दर पृथ्वी बनायौ पृथ्वी मै राम्रो नेपाल बनायौ यहि नेपालमा हिमाल खन्यायौ पहाड खन्यायौ, तराई खन्यायौ एउटा राम्रो नेता दिन लाई किन तिमीले टाउको कन्यायौ किन तिमीलेटाउको कन्यायौ टाउको कन्यायौ टाउको कन्यायौ। ”
“ आमा र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा प्यारो हुन्छ । ”
“ जो व्यक्तिले कहिले गल्ती गरेन त्यस्ले कहिले केहि नयाँ गर्ने कोसिस गरेन । ”
“ जीवन ताशको खेल जस्तै हो । तपाईलाई जून पत्ता मिल्छ त्यो नियति हो। तपाई कसरी खेल्नु हुन्छ त्यो स्वेच्छा हो । ”
“ व्यक्ति आफ्नो कर्तव्य बिर्षिन्छन तर आफ्नो अधिकार तिनिहरूलाई याद रहन्छ । ”
“ जिन्दगी त जम्मा एउटा पीढी सम्मको हुन्छ तर राम्रो काम सयौ पीढी बाँची रहन्छ । ”
“ याद राख की तिमीले चाहेको सबै मिलेको हुदैन कहिले कही त्यसमा पनि परम सौभाग्य हुन्छ । ”
“ तपाइको जीवनमा बर्षहरुको मात्रा हुदैन तर तपाइको जीवनमा बर्षहरुमा जीवनको मात्रा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ”
“ जीवनको आधा असफलताको कारण व्यक्तिको आफ्नो घोडाले छ्लांग लगाउने समयमा त्यसको लगाम तान्नू जस्तो हुन्छ । ”
“ माता पिता आफ्ना सन्तानलाई उत्तरदानमा धनसम्पत्ति होइन अपितु श्रद्धाको भावना दिउन । ”
“ तीन चीजलाई धेरै दिन सम्म लुकाएर राख्न सकिदैन - सूर्य, चन्द्र, र सत्य । ”
“ हर एक चीजबाट पहिले तैयार हुनु' सफलताको रहस्य हो । ”
“ ऊ जसले सोध्छ ५ मिनेटका लागि मुर्ख हुन्छ, जसले सोध्दैन जिवन भर मुर्ख रहन्छ। ”
“ नाउलाई सधै जलमा नै रहनु पर्छ जबकि जललाई कहिले नाउमा होइन ठीक त्यस्तै प्रकार भक्ति गर्ने बाला यस दुनियामा रहुन तर जो भक्ति गर्छन उसको मनमा सांसारिक मोहमाया हुनु हुदैन । ”
डिसेम्बर, २०२१[edit source]
“ मानिस ठुलो हुनपट्टि नलागनु असल हुनपट्टि लागनु्। ”
“ सत्यलाई माया गर्ने व्यक्ति दार्शनिक हुन्छन। ”
“ मलाई सफलताको उपाय थहाँ छैन तर यो थहाँ छ की सबैलाई खुसि बनाउने प्रयत्न असफलको उपाय हो । ”
“ कहिले कही सानु निर्णय पनि जीवनलाई सधैको लागि बदलिन सक्छ । ”
“ जो तपाई बन्न योग्य हुनु हुन्थ्यो त्यो बन्न कहिले ढिलो भएन । ”
“ जुन चिजलाई तपाई बदलिन सक्नु हुन्न तपाईले त्यसलाई अबश्य गर्नु पर्छ । ”
“ कर्म सफलताको मूल हो
“ तपाईले आफ्नु मुस्कान हराउनु भएको छैन । यो ठिक तपाइको नाक मुनि छ । तपाइले बिर्षेको मात्र हो त्यो त्यहाँ थियो । ”
“ तपाइको इच्छा बिना कोई पनि तपाईलाई तुच्छ हुने अनुभूति गराउन सक्दैन । ”
“ मुस्कान तपाइको सुन्दरतामा सुधार गर्ने एउटा सस्तो तरीका हो । ”
“ गल्तीदेखि नसिक्नु नि एकमात्र गलती हो । ”
“ भनाइ छ, ‘तिमी उसलाई माया गर अथवा घृणा, तर उसलाई बेवास्ता भने गर्न सक्दैनौ । ”
“ जब सम्म कोई व्यक्तिद्वारा आफुले गर्न सक्ने संभावना भन्दा अधिक कार्य गरिदैन तब सम्म त्यो व्यक्तिद्वारा ती सबै कार्य हुदैनन जो त्यो गर्न सक्छ । ”
“ सम्पत्ति त्यस व्यक्तिको हुन्छ जो यस्को आनन्द लिन्छ न कि त्यस व्यक्तिको जो यसलाई आफू संग राख्छ। ”
“ मेरो मित्र नै मेरो सम्पदा हो । ”
“ जब सम्म तिमी आंतरिक रूपले (आफु भित्र) शान्ति खोज्न सक्दैनौ भने यसलाई अन्यत्र कही खोज्नु बेकार छ । ”
~एल. ए. रोशेफोलिकाउल्ड~
“ मुस्कान कसैकाे पेवा हाेईन अाफैले कमाएकाे पाैरख हाे त्यसैले जिन्दगि भर हास्नुहोस । ”
“ देशको मूल समस्या दरिद्रता हो र त्यसको कारण अज्ञानता हो । ”
“ अन्त्यतर्फ हामी शत्रूका कठोर शब्दहरू होइन बल्की मित्रका कठोर मौनताहरू सम्झन्छौ । - ”
~मार्टिन लुथर किङ~
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wq/ne/विकिकथन:आजको_कथनहरू&oldid=4230498"
This page was last edited on 25 February 2018, at 07:22.